Kunzima ukuthola izibalo ngaphezulu owaziwa futhi saxoxa kwezombusazwe kunalokho uWinston Churchill. Wayengomunye labo ngesibindi kroil nebalazwe ekhulwini XX. Kodwa hhayi ngaphansi kuka imisebenzi yakhe yezombangazwe, futhi abantu banesithakazelo umuntu umbusi eNgilandi. Sekuyisikhathi eside Churchill izitatimende ngoba yezizathu ezihlukahlukene wangena Isikhwama yegolide aphorisms behlakaniphile.
sezombusazwe omkhulu Ikusasa wazalelwa i, umndeni ahlukile nelungelo weNkosi Genri Spensera e 1874. igama likanina lalingu-indodakazi i usomabhizinisi American, noyise wakhonza njengephayona UK Shansela we Exchequer. Winston wakhuliswa ubuphansi umndeni, kodwa ngenxa yokuthi abazali asiwazi njalo isikhathi esanele naye, ngokuyisisekelo Wayenabo zilaliswe umzanyana - Elizabeth Ann Everest. Waba nomngane wakhe oseduze kakhulu iminyaka eminingi.
Ngenxa basonta lombhalo ephakeme izigodi ahlukile Churchill angase banqatshelwe ukufinyelela phezulu umsebenzi wakhe zezombusazwe, njengoba ngokuvumelana nemithetho England ezicukuthwaneni azikwazanga ukufakwa kuhulumeni. Kodwa ngenhlanhla, umugqa wakhe kwakuyiBhayibheli legatsha ohlangothini Churchills owamsiza ukuba abe oshayelayo.
Esikoleni, Churchill wazibonisa njengoba umfundi nenkani. Njengoba ezothatha isikhundla izikole eziningana, kuphi ukukhuthala kwehlukile. Engafuni ukuba zilalele imithetho eqinile yokuziphatha, isazi sezombangazwe esizayo akwenzekanga futhi sizungeziswe ngezinduku. Kodwa ukukhuthala yakhe ke akunamthelela. Futhi kuphela uma isivele 1889 wayiswa Army ekilasini ekolishi at Harrow, wayebakhathalela izivivinyo. Brilliant odlula kuzo zonke izivivinyo, wabhalisa e-ehlonishwayo esikoleni wezempi e-England, lapho ephothula olingana uLieutenant yesibili.
Nokho, ukukhonza njengomdala isikhulu Churchill akuzange kudingeke ukuba. Eqaphela ukuthi umsebenzi wakhe wezempi awuzizwa, wathatha izibopho umama futhi wakhetha isikhundla umlobeli othile impi. Kuleli qhaza lethu waya Cuba, lapho kulethwa ezimbili imikhuba yakhe eyaziwa kakhulu, ukuze uhlale naye ukuphila: abanothando nogwayi-Cuban futhi isithongwana ntambama. Ngemva Cuba, wathunyelwa India neGibithe, lapho ngesibindi kakhulu iqhaza ezingxabanweni, wathola umfundaze idumela intatheli omuhle.
Izinyathelo zokuqala kwezombusazwe
Ngo-1899, Churchill esikhundleni, kokunquma azinikele ezombusazwe. Joyina i-House of Commons waphumelela at umzamo wesibili. Lapho eneminyaka cishe iqhawe lesizwe, Churchill sathathwa isiboshwa eNingizimu Afrika futhi wenza yokuphunyuka kwakwakhiwa. Lena ukuphela kwendawo lapho esethole iminyaka engu-50.
Wokukhuthazwa isitebhisi Churchill sezombusazwe nehlolamvula ekhaliphile. Phakathi neminyaka embalwa eyalandela waba umahluleli omncane kunabo bonke sezombusazwe enethonya eBrithani. Nokho, ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala, yena ephethwe Ministry of Military Affairs, kabili kuhlulekile ngokwenza izinyathelo esifushane sekuqhamuke. Kodwa ngempela anyuke Olympus zezombusazwe, waphoqwa ukuba neMpi Yezwe II.
Ezikhathini kanzima ngaphambi kuhlaselwa Europe kaHitler, Churchill wamenywa ukuba athathe okuthunyelwe yokuQala uJehova Admiralty, njengoba sekucaca ukuthi nguye kuphela abangakwazi ukuhola izwe elikhulu ukuze siwuphumelele. Ukuba Umphikisi umsekeli oqinile Bolshevism, Churchill nokho wangena sokusebenzisana ne Stalin futhi Roosevelt, kufanele sicabange ukuthi amaNazi - kuba okubi okukhulu. Lokho akuzange kumyekise ekupheleni kwempi e-Europe ukuba ahole ama-anti-kwamaBolshevik Party, ukushaya ukubhubhisa "inhlupho elibomvu", esongela ubuqotho izwe laseYurophu.
Nokho, ngemva kwempi, eNgilandi kwakuhlezi izinkinga zomnotho. Wayedinga inqubomgomo ohlakaniphile obungaholela izwe ngaphandle kokuntengantenga, futhi abantu nje ukhathele ucingo enamandla izingalo. Ngenxa yalokho, Churchill lahluleka okhethweni futhi wanquma ukuthatha umhlalaphansi.
Churchill - Umbhali
amazwi Aphoristic Churchill bathi wayevelele ithalente etemibhalo kuwo. Akumangazi eyayinakho eziningi izincwadi. Ngisho lapho iphoyisa e-India, waqala ukubhala ephepheni lakhe lokuqala, eyabonakala ngaphansi kwesihloko esithi "Impi River". Ukuqala umsebenzi wakhe echazwe encwadini yakhe "Uhambo lwami lokuya-Afrika" futhi "kungukuqala empilweni yami." umsebenzi Churchill sika "Umhlaba Crisis", lapho yena wasebenza iminyaka engaba ngu-eziyisishiyagalombili, yanyatheliswa ngo-oda imiqulu eyisithupha.
Break iminyaka eyishumi emsebenzini wakhe kwezombangazwe lapho walahlekelwa sokhetho Ababesadla ngoludala ngo-1929, undunankulu esizayo wachitha ngokubhala kwakhe Biography omningi ezine kayisemkhulu "Marlborough:. Ukuphila Kwakhe futhi Times" "Umlando seMpi yoMhlaba yesiBili" esanyatheliswa imiqulu eyisithupha futhi bagxekwa kahle ihlanganiswe ivolumu yesibili futhi ebuthaka, uma iqhathaniswa naso langaphambilini, yesihlanu. Ekugcineni, eminyakeni yokugcina yokuphila kwakhe enikelwe ngokubhala Churchill umsebenzi ezinkulu "Umlando ezizwe lesiNgisi", isihloko okuyinto kwaba khona impi futhi ezombusazwe.
amazwi Famous Churchill
Naphezu imisebenzi yayo elikhanyayo zezombusazwe, Churchill Waziwa kakhulu nolimi lwakhe abukhali futhi umuzwa ngokuvamile British isimo sokwenama. Abaningi zezinkulumo zakhe impikiswano, ezinye kukhona categorical khulu. Kodwa kunento eyodwa eqinisekile - bona bonke bayakufanelekela ukubazi kangcono. Emazwini akhe Churchill sika ngezombusazwe, ukuphila futhi impi ekhonjiwe e imithombo eminingi. Ngokusho amandla futhi ashaya yokuthumela bona kakhulu abafana izitatimende ezinye odumile waseBrithani - Mark Twain futhi George Bernard Shaw.
Emazwini akhe Churchill ngokuphathelene nokuphila kungenziwa bangeniswa inkonzo njengesibonelo we rationalism ekhexisayo. Lapho ebuzwa ukuthi indlela akwazi ukuphila ngokuvumelana naleyo minyaka (futhi wafa eneminyaka engu-91) bese ugcine nengqondo esangulukile futhi nizithibe, naphezu imikhuba yakhe embi, esho ukuthi imfihlo ilula: nje ungalokothi ume lapho ungakwazi uhlale , futhi ayihlali lapho ungakwazi ulale. Of a beshadile futhi bejabule, liyokuma iminyaka engu-57, wenza iqiniso nizithibe, kuba lula ukuphatha isizwe kunezingane ezine (kunjengokungathi eziyisihlanu kuzo).
aphorisms kwezombusazwe nakwezempi
Ngaphambi kokuba abe uNdunankulu, Churchill wayaziwa eBrithani izinkulumo zalo anti-lezempi. Wayehlala njalo nje ukuthi izwe ngeke ukwazi ukugwema impi, uma efuna ukuba abe namandla futhi azimele. Emazwini akhe Churchill sika mayelana nempi zivame ezihlobene inqubomgomo, ezifana ngayo: ". Ngo impi, ungakwazi ukubulala kanye kuphela, kwezombusazwe - okuningi" Noma kunjalo, isazi sezombusazwe okukhulu ukuqonda okungenangqondo kwalesi sibhicongo, lapho ethi empini - lena ikakhulukazi ibhuku amaphutha.
aphorisms Political, futhi, okungenani ezaziwayo. Wonke umuntu uyazi nesitatimende Churchill intando yeningi, lapho ebiza ke obubi kunabo bonke ohulumeni, ngaphandle kwabanye. Kodwa akazange ukuhlonipha abavoti. Nakhu isibonelo esivelele: "I-agumenti esinamandla kunazo zonke ekulweni intando yeningi - ingxoxo emfushane nogogo Umvoti isilinganiso."
Futhi kwakukhona igeja?
AMAZWI Churchill sika odumile Stalin wathatha izwe egejeni futhi washiya ngayo ngebhomu le-athomu, eyaziwa kuphela ngaphandle uma ingane, futhi ubunikazi bayo akukaze. Ingabe akumangalisi ukuthi Churchill, eyachitha konke ukuphila kwayo ngolaka walwa emelene Bolshevism, ngokungazelelwe wakhuluma ngokumthokozisa mayelana umholi wakhe oyinhloko? Kuyaziwa ukuthi kuphela mayelana Stalin Churchill wathi izikhathi mayelana 8, kuhlanganise izikhathi 5 - lokho. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala le nkulumo ezibhalelwe ngo-1988, lapho iphephandaba "Russia namaSoviet" yakhipha incwadi Andreeva, eyayithi lihlabelela i ODE zokudumisa helmsman ohlakaniphile.
Ngemva kwalokho, le nkulumo yathathwa zonke izinhlobo zabantu, futhi yena yacabanga emhlabeni wonke, ezibangela umonakalo omkhulu e-anti-Stalinists ekamu. Eqinisweni, uma fanatically ukukhonza iqiniso, lena ibinzana Churchill ukuba Stalin cha. Enkulumweni yakhe phambi UNdunankulu House of Commons 8 September 1942 inikeza hlangothi okuningi, ngenkathi ngokuvamile kakhulu kwenhlonipho kukaStalin impendulo. Uthi zakhe ezivelele izimfanelo ubuholi, futhi, okubaluleke kakhulu, ngakho manje izwe kunesidingo. Lamagama mayelana igeja kanye ibhomu le-athomu - kuyinto umsebenzi lilonke ukuhunyushwa yale nkulumo (kakhulu esakaza gqizisa akhe ngamazwi athi "omkhulu", "ngqondongqondo" futhi "abaningi"). Libuye into efana itholakala Article I. Deutscher (nakuba futhi "ibhomu" futhi "amandla enuzi ngokuhlakaza").
Churchill izitatimende mayelana Russia
ukungathandi Churchill ka Bolshevism Kuyaziwa, nakuba kuba eyinqaba kakhulu. Phakathi nempi, yena njalo wagcizelela ababaze ukuvelela feat abantu Russian ekulweni amaNazi, kodwa futhi uncome izimfanelo ubuholi kaStalin. Nakuba ngokuvamile isimo sakhe sengqondo maqondana socialism kwaba disapproving. izitatimende eziningi Churchill ukuqonda, isibonelo, lapho uthi ne-capitalism ne-ndawonye abakwazi ukugwema ukungalingani, kuphela eyokuqala - e inhlalakahle, kanti eyesibili - ngobumpofu. Mayelana amaBolshevik, wathi lesi sizwe ukudala izinkinga zabo, okungase kunqotshwe ngempumelelo. Kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi intando yeningi yangempela eRussia, wabona isizathu esiyinhloko okuyinto ngeke abe namandla eqinile.
Kamuva encwadini yakhe: "Kwenzeke kanjani Ngalwa Russian" Churchill wabhala ukuthi amandla eSoviet Union bekulokhu ngokuphawulekayo wayengakuboni isimo sawo kuleli zwe, okuyinto ayikaze njengoba donsile njengoba kwakubonakala, futhi buthaka njengabantu abanye wayecabange.
Churchill kusho angakhipha incwadi ehlukile - ukuzungeza ukuhlakaza kumaminithi. Uthando lwakhe ekuphileni, ukuba nesimo sengqondo kanzulu ngokoqobo kungaba kuphela umona. Ngokuvamile, njengoba abaningi nabantu abakhulu, izitatimende Churchill sika kukhona nakuba, kodwa ngokuvamile hit ilungelo on target. Okunjalo mantra emfushane ukusiza Sober up the ukwazi yokubuswa kuwo banal, livamile.
Leyla Behti: A Indaba yempumelelo inkanyezi French
Kardissky umhlaba 1661. Russian-Swedish neMpi zeminyaka 1656-1658.
Amalotha Budenny: Biography of induna ezithakazelisayo amaqiniso
Kanjani hhayi ukuba mkhulu phakathi nenkathi yokukhulelwa? imithetho Five elula
Mayelana nencwadi ka-Osho "Ukuqwashisa"
Igama Ubuholi Prokhor. ukuze abantu